लालाबाला सहित प्रदर्शनमा उत्रिए चापागाउँका स्थानियवासी, बेवास्था गरे जनप्रतिनिधिको घर घेराउ हाल्ने चेतावनी ! [ उनीहरुसंगको कुराकानी, भिडियो ] - PUBLICAAWAJ
लालाबाला सहित प्रदर्शनमा उत्रिए चापागाउँका स्थानियवासी, बेवास्था गरे जनप्रतिनिधिको घर घेराउ हाल्ने चेतावनी ! [ उनीहरुसंगको कुराकानी, भिडियो ]
प्रकाशित : सोमबार, बैशाख ३०, २०७६१५:५५ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, चापागाउँ-सातदोबाटो सडक लामो समय देखी मर्मत नभएको हुँदा धुलो धुँवाबाट हार खाएका भएका स्थानीयवासी प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
सातदोवाटो चापागाँउ सडक मर्मतको माग राख्दै प्रर्दशन गरिरहेका स्थानीयबासी चक्का जाम झन् कडा बनाउने बताएका छन् । सडकको स्थिति यति नाजुक भैसक्दा पनि सरोकारवालाहरुको यस तर्फ आँखा नगएको भन्दै उनीहरु बिहिबारबाट प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
शनिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै चापागाँउका स्थानीयबासीको मुल सडक निर्माण दबाब समुहले सोमबारबाट सडक मर्मत नभएसम्मका लागि सडक बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । केहि दिन २/४ घण्टा बन्द गर्दा पनि यस बारे राम्रो प्रतिक्रिया नआएपछि उनीहरुले आइतबारबाट बिहान ७ बजे देखि साँझ ५ बजे सम्म सडक बन्द गर्न लागेका हुन् ।
आइतबार सवारी साधन देखि लिएर सम्पुर्ण पसलहरु पनि बन्द गर्दै स्थानीयवासीले प्रदर्शनलाई चर्काएका छन् । टाहाखेल देखि ठेचो सम्म नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
स्थानियवासीका अनुसार यस बारे जनप्रतिनिधि र प्रशासनले बेवास्ता गरेको बताउँदै सडक मर्मत नभएसम्म प्रदर्शन जारी नै रहनेछ । सरोकारवालाको अझै ध्यानाकर्षण नभए नगरपालिकामा ताला बन्दी सहित जनप्रतिनिधिको घर घेराउ गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
माध्यामिक विद्यालयका कर्मचारी मृत फेला